सबै कुरा तपाईलाई इन्स्टाग्राम कथाहरूका बारे जान्न आवश्यक छ Martech Zone
सबै कुरा तपाईलाई इन्स्टाग्राम कथाहरूको बारेमा जान्नु आवश्यक छ
बुधबार, डिसेम्बर 13, 2017 बुधबार, सेप्टेम्बर 2, 2020 Douglas Karr
Instagram छ २ million० मिलियन दैनिक प्रयोगकर्ताहरू र यो तपाइँको व्यवसाय को लागी अविश्वसनीय सम्भाव्यता छ, विशेष गरी जब तपाइँको कम्पनीले यसलाई अपनाउँछ Instagram Stories सुविधा तपाईंलाई थाहा छ व्यापारहरूको 20% कथाहरूको परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष सन्देशहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ? वास्तवमा, सबै लोकप्रिय कथाहरूको% 33% व्यवसाय द्वारा अपलोड गरियो!
एक इन्स्टाग्राम कथा के हो?
इन्स्टाग्राम कथाहरू व्यवसायलाई दृश्य साझा गर्न अनुमति दिन्छ कथा तिनीहरूको दिनको, बहु छवि र भिडियोहरू मिलेर बनेको।
इन्स्टाग्राम कथाहरू बारे तथ्यहरू
इन्स्टाग्राम कथाहरू कति लामो हुन्छ? १ seconds सेकेन्ड प्रत्येक।
इन्स्टाग्राम कथाहरू हराउने भन्दा पहिले कति लामो हुन्छ? तिनीहरू केवल २ 24 घण्टाको लागि अवलोकन योग्य छन्।
के इन्स्टाग्राम कथाहरू सार्वजनिक छन्? ती अनुमतिको अनुसरण गर्नुहोस् जुन तपाईंले आफ्नो प्रोफाइलको लागि सेट गर्नुभयो।
कस्तो प्रकारको भिडियो इन्स्टाग्राम कथाहरूका लागि अपलोड गर्न सकिन्छ? MP4 ढाँचा H.264 कोडेक र AAC अडियो संग, 3,500, .०० केबीपीएस भिडियो बिटरेट, एक f०fps फ्रेम दर वा मुनि, १ 30०px चौडा, र अधिकतम फाइल साइज १mbmb को सीमा।
तपाईं छवि, भिडियो, र संयोजनहरूको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ बुमरैgs्गहरू तपाईंको इन्स्टाग्राम कहानीमा।
इन्स्टाग्राम कहानी सफलताको कुञ्जीहरू
बाट विस्तृत इन्फोग्राफिक अगाडि राजधानी तपाईलाई कथा मात्र बनाउँदैन, तर एक इन्स्टाग्राम रणनीति बनाउँदछ। सफलताको लागि केहि सुझावहरू यहाँ छन्:
एक संयोजन योजना रणनीति सबै सम्पत्तिहरू प्राप्त गर्न तपाईले चाहानु भएको कथा सिर्जना गर्न आवश्यक छ।
एक छान्नुहोस् समय जहाँ तपाईका अनुयायीहरू संलग्न छन्।
बनाउनुहोस् प्रभाव पहिलो seconds सेकेन्डमा तपाईंको दर्शक बाँकी कहानीमा रहन्छ।
आफ्नो कथा शूट गर्नुहोस् ठाडो रूपमा - तपाईंको दर्शकले यसलाई कसरी हेरिरहेको छ।
प्रयोग जियोट्यागि। क्षेत्रीय लक्ष्यीकरणको साथ%%% बढी संलग्नता प्राप्त गर्न।
एक साधारण सिर्जना गर्नुहोस् तीर दर्शकहरूको लागि तपाईंको वेबसाइटमा स्वीप अप गर्नका लागि।
समावेश गरिएको फोकस hashtags त्यसैले तपाइँका कथाहरू कहानी रिंगहरूमा समावेश छन्।
जस्तै अनुप्रयोग प्रयोग गर्नुहोस् कटलरी तपाईंको कथालाई श्रृंखलामा टुक्राउन।
तपाईंको कथालाई ठोससँग समाप्त गर्नुहोस् कल-टु-एक्शन संलग्नता प्रोत्साहित गर्न।
बाह्य हुने बारे सोच्नुहोस् प्रभाव तपाइँको कहानी लिनको लागि, यसले सment्गतमा करीव २०% ले वृद्धि गर्दछ!
कथनको अनौपचारिक प्रकृति प्रयोगको साथ निर्माण गर्न रaदिनुहोस् दृश्य पछाडि आफ्नो व्यापार हेर्नुहोस्
कथा दर्शकहरुलाई दिनुहोस् अनुपम प्रस्तावहरू ताकि तपाईं तिनीहरूलाई ट्र्याक गर्न सक्नुहुनेछ र तिनीहरूको वफादारीको लागि इनाम दिनुहोस्।
कथाहरू एक धक्का प्रयोग गर्नुहोस् सर्वेक्षण पोल स्टिकर प्रयोग गरी तपाईंको श्रोताको लागि बाहिर। यसलाई छोटो र मीठो राख्नुहोस्, तपाईंसँग केवल २ characters अक्षरहरू छन्!
२०१ Instagram अगस्टमा सुरू भएदेखि इन्स्टाग्राम कथाहरू बृद्धि भएको छ, र यसको अधिकतर कसरी गर्ने भनेर पत्ता लगाउँदा तपाईंको सोशल मिडिया मार्केटिंग प्रयासहरूको लागि ठूलो फाइदा हुनेछ। तपाई केको लागि प्रतिक्षा गर्दै हुनुहुन्छ? अब तपाइँको कथा भन्न शुरू गर्नुहोस्। प्रगति राजधानी बाट Nivine
यहाँ महान इन्फोग्राफिक छ, इन्स्टाग्राम कथाहरूको लागि एउटा सानो व्यवसाय गाईड:
टैग: इन्स्टाग्रामInstagram कथाहरूमार्केटिंग भिडियोहरूकथाहरू
Conversica: सम्पर्क, सगाई, पोषण र एक एआई सहायक को उपयोग क्वालिफाइ
घंटा: बिक्री टोलीका लागि कुराकानी खुफिया प्लेटफार्म